सोमबार भगवान शिवजीको ब्रत किन बसिन्छ? कसरी सुरु भयो व्रत बस्ने चलन..हेर्नुहोस – च्यालेन्ज नेपाल
सोमबार भगवान शिवजीको ब्रत किन बसिन्छ? कसरी सुरु भयो व्रत बस्ने चलन..हेर्नुहोस
एकजना असाध्यै धनवान व्यापारी थियो, उसको घरमा धन आदिको कुनै किसिमको कमी हुँदैनथ्यो। तर ऊ सन्ततिसुखको अभावको पीडा भोग्दै थियो। यही नै साहूको चिन्ताको विषय थियो।
ऊ पुत्रको कामना गर्दै प्रति सोमवारका दिन शिवजीको व्रत र पूजन गर्ने गर्दथ्यो र सायंकालमा शिव मन्दिरमा गएर शिवजीको श्री विग्रहअगाडि दियो बाल्ने गर्थ्यो। उसको यस भक्तिभावलाई विचार गरेर एकपटक श्री पार्वतीमाताले शिवजीसँग भन्नुभयो – हे स्वामी ! यो वैश्य हजुरको अनन्य भक्त हो अनि सदैव हजुरको व्रत र पूजन असाध्यै श्रद्धापुर्वक गर्दछ। यसको मनोकामना त पूर्ण गर्नुपर्दछ।
पार्वतीका कुरा सुनेर शिवजीले भन्नुभयो – हे पार्वती। यो संसार कर्मक्षेत्र हो। जसरी किसान खेतमा जस्तो बीउ छर्दछ त्यस्तै फल प्राप्त गर्दछ। त्यसरी नै यस संसारमा प्राणीले जस्तो कर्म गरेको हुन्छ त्यस्तै फल भोग्न पाउँछ। पार्वतीले अत्यन्त आग्रहपूर्वक भन्नुभयो – महाराज ! जब ऊ हजुरको अनन्य भक्त छ र यसलाई कुनै किसिमको दुःख छ भने त्यस कष्टलाई अवश्य निवारण गर्नुपर्छ किनकि हजुर सदैव आफ्ना भक्तप्रति दयालु हुने गर्नुहुन्छ र तिनका समस्त दुःखकष्ट निवारण गर्नुहुन्छ। यदि हजुरले भक्तलाई राहत प्रदान गर्नु भएन भने मनुष्यले हजुरको सेवा तथा व्रत किन पो लिनु र ? पार्वतीको यस्तो आग्रह सुनेर भगवान भोलेनाथ पुनः भन्न थाल्नुभयो – हे पार्वती ! यसको कुनै सन्तति छैनन त्यसैले यो चिन्ताग्रस्त भई दुःखी जीवन व्यतीत गर्दछ।
यसको भाग्यमा सन्तान छैनन तथापि म तिम्रो आग्रहका कारण यसलाई पुत्रप्राप्तिको वरदान प्रदान गर्दछु। तर उक्त पुत्र बाह्रवर्षसम्म मात्र जीवित रहने छ। यसबाहेक यस भक्तका लागि म अरु केही पनि गर्न सक्दिन। यी सबै कुरा वैश्यले समेत सुनिरहेको थियो, यसबाट उसलाई न प्रसन्नता नै भयो न केही दुःख नै। ऊ पहिले जसरी नै शिवजीको व्रत र पूजन गर्दै रह्यो। केही समय व्यतीत भएपछि साहूकी स्त्री गर्भवती भई र दस महिनापछि उसको गर्भबाट एउटा अति सुन्दर पुत्रको जन्म भयो।
साहूका घरमा ठूलो उत्सव मनाइयो तर साहूले नवजात शिशुको बाह्रेवर्षको मात्र आयु छ भन्ने थाहा पाएर धेरै प्रसन्नता व्यक्त गरेन र न कसैलाई यस रहस्यको भेद नै बतायो।
जब त्यो बालक ११ वर्षको भयो, बालककी आमा त्यसको व्रतबन्ध, विवाह आदि संस्कार संपन्न गर्ने कुरा गर्न थालिन तर साहू यस कुरामा सहमत भएन। बरु उसले पुत्रलाई अध्ययन गर्न काशी पठाउने निधो गर्यो। व्यापारीले आफ्नो सालो अर्थात् बालकको मामालाई प्रशस्त धन उपलब्ध गराई बाटोमा जुन स्थानमा पुगे पनि यज्ञ गर्दै र ब्राहमण-भोजन गराउँदै बालकलाई काशी लिएर जान आदेश गर्यो।
ती दुबै मामा-भाञ्जा यज्ञ संपन्न गर्दै र ब्राहमण-भोजन गराउँदै जाँदै थिए। बाटोमा तिनले एउटा सहर भेटे। त्यस सहरमा राजाकी छोरीको विवाह हुँदै थियो र अन्य देशको राजाको छोरो जो विवाह गर्न जन्ती लिएर आएको थियो त्यो विचरा कानो थियो। दुलाहाका पितालाई कतै कन्यापक्षले दुलाहालाई देखेर विवाहमा अवरोध सिर्जना गर्ने त होइनन भन्ने चिन्ता थियो।
बाटोमा बेउलाको बाबुले अति सुन्दर साहूपुत्रलाई देखेर मनैमन विचार गर्यो, स्वागतद्वारमा यही बच्चोलाई बेउलो बनाएर राख्नु पर्ला ! यस्तो सोचेर वरका पिताले त्यस केटो र उसका मामासँग कुरा गर्दा ती पनि यस कुरामा सहमत भए। अनि त्यस वैश्यपुत्रलाई बेउलाका पहिरन लगाएर घोडामा चढ़ाएर स्वागतद्वारमा लिएर गए र सबै कार्य प्रसन्नतापूर्वक पूर्ण भयो। त्यसपछि वरका पिता पुनः विचार गर्न थाल्यो, यदि विवाहका अन्य कार्य पनि यसै केटाको सहयोग लिई गर्दा के बेफाइदा होला र ? बेउलाको पिताले वैश्यपुत्र र उसका मामासँग भन्यो – यदि तपाईंले यज्ञमण्डपमा बेउलाको सट्टामा यिनै बालकको सहयोगमा यज्ञ, गोडधुवा, कन्यादान आदि विवाहका शेषकृत्य सम्पन्न गराउनु भए ठूलो कृपा हुनेथियो। म यसको प्रत्युपकारमा हजुरलाई प्रशस्त धन प्रदान गर्नेछु।
ती दुबै मामाभान्जाले राजाको प्रस्ताव स्वीकार गरे र विवाहको शेष कार्य पनि साह्रै राम्ररी सम्पन्न भयो। तर विदा हुने बेलामा त्यस व्यापारीपुत्रले राजुकुमारीको खास्टोको छेउमा लेख्यो – तेरो विवाह त छलपूर्वक म वैश्यपुत्रसँग भएको छ र जुन राजकुमारसित तँलाई विदाई गरी पठाउने छन त्यो केटो त कानो छ। म अध्ययन गर्ने उद्देश्यले काशी पढ़न जाँदैछु। केटो गएपछि राजकुमारीले आफ्नो खास्टोमा लेखेको देखि र उसले राजकुमारसंगै जान अस्वीकार गरी। बेउलीले भनी – यो राजकुमार मेरो पति होइन, मेरो विवाह यससङ्ग भएको होइन। मेरा पति त अध्ययन गर्न काशी गएकाछन।
राजकुमारीका माता-पिताले यथार्थ कुरो पत्ता लगाए र आफ्नी छोरीको विदाइ गरेनन अनि जन्ती बेउलीबिना नै फिर्ता गयो। उता सेठको छोरो र उसको मामा काशी पुगे।
त्यहाँ पनि तिनले यज्ञ गर्ने सिलसिला जारी राखे साथै केटोले अध्ययन प्रारम्भ गर्यो। जब केटाको आयु बाह्र वर्षको भयो त्यस दिन पनि यज्ञको योजना हुँदैथियो कि केटो अचानक बिरामी भयो र उसले मामासँग भन्यो – मामा आज मेरो स्वास्थ्य ठीक छैन। मामाले भित्र गई आराम गर्न भने।
केटो भित्र पसेर सुत्यो र केही समयपछि उसका प्राणपखेरु उडे। मृत भान्जो देखेर मामालाई असाध्यै पीडा भयो अनि सोच्न थाल्यो यदि मैले शोकका कारण रुनकराउन थालें भने यज्ञको संपादनमा विघ्न आउने छ, अतः उसले शीघ्रताका साथ यज्ञ सम्पन्न गरी ब्राहमण विदा गरेपछि रुनकराउन र छट्पटाउन थाल्यो।
अनि पुनः पार्वतीले भन्नुभयो – हे मालिक ! यस बच्चालाई अझ आयु प्रदान गर्नुहवस नत्र यसका माता-पिता तड़पी-तड़पी मृत्युपरवश हुनेछन। पार्वतीले बारम्बार आग्रह गर्दा शिवजीले त्यसलाई जीवन प्रदान गर्नुभयो र शिवजीको कृपाले केटो जीवित हुन पुग्यो। शिवजी-पार्वती आफ्नो धाम कैलाश जानुभयो। त्यसपछि त्यो केटो र मामा पहिले जसरी नै यज्ञ गर्दै र ब्राहमण-भोजन गराउँदै आफ्नो घरतिर लागे। बाटोमा त्यही सहर आयो जहाँ केटाको विवाह भएको थियो।
त्यहां आएर तिनले यज्ञ आरंभ गरे, राजाले त्यस वैश्यपुत्रलाई चिन्यो र महलमा लगेर ती दुबैको स्वागतसम्मान गर्यो। साथै धेरै दास-दासीसहित विधिपूर्वक छोरीज्वाइँलाई विदा गर्यो। आफ्नो सहरका नजीकमा पुगेपछि मामा घरमा खबर गर्न बेउलाबेउलीभन्दा पहिले नै घरतर्फ गयो। उता बाह्रवर्ष बितेपछि त्यस केटाका माता-पिता घरको छानामा बसेर यदि हाम्रो पुत्र सकुशल फर्कियो भने राजी(खुशीसाथ छानाबाट तल झर्ने नत्र छतबाट फाल हालेर प्राण त्याग्ने भनी प्रतिज्ञाबद्ध भई छोराको बाटो कुरेर बसेका थिए ।
कोरोनाबाट बच्ने उपायहरु हेर्नुहोस भिडियोमा..
Previous आज आइतबार बिहानै यसरी गर्नुहोस सूर्यको पूजा, भाग्य खुल्नेछ !
Next बुधबारको दिन यी ५ काम गर्नुस्, सधै शुभ खबर सुन्न पाइनेछ